News + Events • Help Me Grow WA
Blog Wararka Wargeysyada Dhacdooyinka Muuqaalo Webinars
Abriil 19, 2022
Help Me Grow Washington 2021 Warbixinta Guulaha
Ka akhriso saamayntayada wadareed ee cusub ee Help Me Grow Washington 2021 warbixinta Guulaha.
Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Baadhitaannada Koritaanka
Developmental screenings are a series of illustrated questionnaires that can be completed by the person who knows your child best, YOU.
04/27/2022 9:00 subaxnimo 04/27/2022 10:00 subaxnimo
Waxtarka Iskaashatada Horumarinta Carruurnimada Hore ee Wax ka qabashada Caafimaadka Carruurta iyo Baahiyaha Bulshada inta lagu jiro Faafida COVID-19
Daraasadani waxay qiimaynaysaa waxtarka Iskaashatooyinka qaybaha badan ee Horumarinta Carruurnimada Hore (PECD) ee ilaalinta baahiyaha bulshada baadhista, gudbinta, iyo bixinta adeegga carruurta inta lagu jiro aafada COVID-19.
04/18/2022 9:00 subaxnimo 04/18/2022 10:00 subaxnimo
Isbeddellada Awoodda Lagu Nuuxinayo Tilmaanta-Kiliinikada-Ujeedada Bulshada inta lagu jiro Faafida COVID-19
Wax badan ka baro natiijooyinka daraasaddan kuwaas oo hagi doona dadaalka lagu xoojinayo awoodda bulshooyinka si ay u daboolaan baahiyaha caafimaad iyo bulsho ee dadka deggan.
03/30/2022 12:00 pm 03/30/2022 1:00 duhurnimo
Beddelidda Booqashada Fayo-qabka Carruurta ee Carruurta: Horumarinta & Tijaabinta Meel Cusub oo Taageerada Carruurta Isku-dhafan
Baro wax badan oo ku saabsan ka qaybgalka HMG National ee dadaalka loogu jiro beddelka booqashada wanaagsan ee ubadka iyada oo loo marayo tignoolajiyada Maarso 30!
Ilaalinta Koritaanka Koritaanka Koritaanka iyo Ogaanshaha Hore
CDC waxay dhawaan soo saartay horumarada horumarka iyo talooyinka waalidka. Baro sida bahwadaagta HMG ay uga hadli karaan ugana faa'iidaysan karaan tilmaamahan cusub.
03/14/2022 12:00 pm 03/14/2022 1:30 galabnimo
DC: 0 - 5
Isku diwaangeli tababarkan bilaashka ah ee xiisaha leh ee ku saabsan caafimaadka maskaxda ee dhallaanka-horraanta carruurnimada!
Fiiri qalabkayaga cusub ee Help Me Grow Partner!
Qalabka Iskaashatada waxaa loo sameeyay si ay u bixiso agab isgaarsiineed si ay u taageeraan la-hawlgalayaasha xiriirkooda ku saabsan Help Me Grow Washington.
Help Me Grow WA Waxay ugu adeegtaa Qoysaska Qorshaha Daryeelka Badbaadada ah
Qorshaha Daryeelka Badbaadada ah ayaa si rasmi ah loo bilaabay Diseembar 1 wuxuuna ka caawin doonaa qoysas badan inay ku xidhmaan ilaha muhiimka ah ee bulshadooda.
Diseembar 2021 Warsidaha Help Me Grow Washington
Waa xilli buskud-dubidda iyo qurxinta! Marka laga soo tago farxadda damaashaadka, shabakadeena Help Me Grow ayaa si adag u shaqaynaysa dhismaha kaabayaasha iyo agabka loo baahan yahay si loo caawiyo caruur badan iyo qoysas Washington ah inay ku xidhmaan agabka ay u baahan yihiin inay caafimaad qabaan.
Oktoobar 2021 Warsidaha Help Me Grow Washington
Halkan waxa aad ka heli kartaa wararka qaranka, gobolka iyo gobolka, iyo agabka kale ee shabakada HMG.
Help Me Grow WA Warbixinta Guulaha Sannadka Dhexe
Ka akhriso saamaynta wadareedkeena ee Help Me Grow cusub ee Washington Warbixinta Guulaha Sannadka Dhexe.
Oktoobar 29, 2021
U fiirso hooyo kasta oo tirisa agabka u doodista!
Qalabkani waxa uu horudhac u yahay u doodista iyo agabka aad u isticmaali karto inaad ku riixdo isbeddelka bulshooyinkaaga si aad u horumariso caafimaadka hooyada iyo sinaanta caafimaadka.
11/04/2021 1:00 duhurnimo 11/04/2021 2:00 galabnimo
Jidka Hore 2021: Hogaamiyaasha Soo baxaya
Ku biir Isbahaysiga Carruurta wada hadal bulsho oo muhiim ah oo ku saabsan horumarinta sinnaanta jinsiyadda ee carruurta iyada oo loo marayo siyaasadda guud.
Oktoobar 19, 2021
Iskaashigu Si Looga Faa'iidaysto Taageerada Koritaanka Ubadka
Webinar-kan wuxuu soo bandhigayaa "Help Me Grow," "Baro Calaamadaha. Horey u dhaqan” iyo “Vroom” oo tus sida ay isugu habboon yihiin oo midba midka kale u xoojin karo. Waxaan maqli doonaa sida looga hirgaliyo jaaliyadaha Washington waxaanan ku ogeysiin doonaa sida aad saddexdaba uga bilaabi karto.
11/16/2021 11:00 subaxnimo
Jinsiga & Waxbarashada: Taageerida Samaynta Aqoonsiga Qoomiyad-Qowmiyad ee Carruurnimada Hore
Ku biir Machadka Hunt ee Noofambar 16 si ay u helaan Taxanahooda Jinsiga iyo Waxbarashada ee caanka ah, kaas oo u jeedin doona dareenkiisa Taageerida Aqoonsiga Qoomiyadeed ee Wanaagsan ee Samaynta Carruurnimada Hore. Waxaa dhexdhexaadinaysay Dr. Jacequeline Jones oo ka tirsan Mu'asasada Horumarinta Ilmaha.
11/02/2021 11:00 subaxnimo
Dadaallada Hore: Saamaynta Muddada Dheer ee Waxqabadyada Carruurnimada Hore
Ku biir Machadka Hunt ee Noofambar 2 wada hadal lala yeesho guddi khubarada hormuudka ka ah goobta oo ku saabsan waxa sayniska ugu dambeeyay uu ka yiraahdo "Saamaynta Muddada Dheer ee Waxqabadyada Carruurnimada Hore."
Sebtember 10, 2021
Fiiri Qalabka Ololaha Carruurnimada Hore ee AAP
Akademiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Carruurta (AAP) waxay bixisaa qalab isgaarsiin, oo ay ku jiraan shareables bulsheed, boodhadh iyo sawiro si ay u fududeeyaan la xidhiidhka la-hawlgalayaasha iyo sharci-dejiyeyaasha.
09/29/2021 12:00 pm 09/29/2021 1:30 galabnimo
Ragga ugu Caadiga ah: Muhiimadda Aabayaasha Inta lagu jiro Xilliga Dhalmada (iyo wixii ka dambeeya)
Bandhigani waxa uu muujin doonaa siyaabaha ay aabayaashu u dareemaan in laga tagay inta lagu jiro xilliga dhalmada ee dhinacyo kala duwan, muhiimada xiriirka aabbaha iyo dhallaanka, iyo arrimaha khatarta ah ee gacan ka geysta hoos u dhaca caafimaadka dhimirka.
Ogosto 19, 2021
Ogosto 2021 Warsidaha Help Me Grow Washington
08/25/2021 1:00 duhurnimo 08/25/2021 2:00 galabnimo
Webinar-kan wuxuu soo bandhigayaa Help Me Grow WA, Baro Calaamadaha. Horey u samee
Luulyo 1, 2021
Juun 2021 Warsidaha Help Me Grow Washington
Wargeyskeena Juun waxaa ku jira wararka Help Me Grow ee heer qaran iyo heer gobol iyo agab kale oo loogu talagalay waalidiinta iyo bixiyeyaasha. Akhri wax dheeraad ah!
Juun 17, 2021
Cusboonaysiinta Kooxda Muhiimka ah ee HMG WA
Kooxda Muhiimka ah waxay aqoonsan tahay baahida loo qabo in la horumariyo qaab-dhismeedka hoggaanka si loo daboolo baahida nidaamka HMG ee ballaarinaya.
Juun 15, 2021
Waxaan rabnaa inaan kaa maqalno! Qaado oo wadaag sahanka HMG.
Help Me Grow Washington waxay haysataa fursad xiiso leh oo lagu maqlo qoysaska WA iyo bulshooyinka – qaado sahankan cusub maanta!
Hordhac weyn oo ku saabsan Help Me Grow Washington iyo isbahaysiga xubnaha bulshada iyo ururada.
Qalabka iyo Kaalmada Bilaashka ah: Ku Bilow Dhismaha Maskaxda Vroom
Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington, Waxyaabaha Muhiimka ah ee Barnaamijka Carruurnimada waxay bixinaysaa qalab daabacaadda "Starter" oo bilaash ah iyo kaalmo farsamo oo ku saabsan sida loo isticmaalo Vroom.
05/13/2021 8:30 subaxnimo 05/13/2021 12:00 galabnimo
Help Me Grow Dhammaan Shirka Kooxda Waxqabadka Gobolka
Kulankani waxa uu isu keeni doonaa xubnaha lixda kooxood ee Help Me Grow ee koox hawleedka gobolka oo dhan. Maanta isdiiwaangeli!
Abriil 22, 2021
Abriil 2021 Warsidaha Help Me Grow Washington
War wanaagsan oo carruurta iyo qoysaska ah! Golaha Wakiilada ee gobolka ayaa qaaday talaabo weyn oo hore loo qaaday dhawaan isagoo meel mariyay Xeerka Bilawga Xaqa ah ee Carruurta. Ka akhri wax badan oo ku saabsan biilka iyo wararka kale ee la xiriira HMG.
04/06/2021 8:00 subaxnimo 04/08/2021 2:00 galabnimo
Brazelton Touchpoints Center 2021 Madasha Qaran ee Virtual
Ku biir Brazelton Touchpoints Center u dabbaaldegaya 25 sano oo shaqo ah Madashii Qaran ee ugu horreysay (Abriil 6-8, 2021)!
04/07/2021 10:00 subaxnimo 04/28/2021 10:30 subaxnimo
Ku Socod Virtual leh Help Me Grow Outreach: Taxane webinar afar qaybood ah
Ku biir xiriiriyeyaasha guud ahaan Help Me Grow (HMG) Shabakadda Qaranka marka ay baranayaan siyaabaha cusub ee loo sameeyo wacyigelinta HMG ee adduunka oo u baahan habab fog iyo muuqaal ah.
Maarso 8, 2021
Help Me Grow Washington 2020 Warbixinta Guulaha
Ka akhriso saamayntayada wadareed ee ku jirta warbixinta Guulaha Help Me Grow Washington 2020 cusub.
Febraayo 22, 2021
Febraayo 2021 HMG WA Warsidaha
Waa wakhti mashquul badan marka aan u doodno HMG ee sharci dejinta - ka hel warar badan, cusbooneysiin iyo agab warsidaha bishaan!
Febraayo 17, 2021
La kulan Hogamiyayaasha Kooxda Waxqabad ee HMG ee cusub
Washington Communities for Children (WCFC) waxay buuxisay dhammaan doorarka Hoggaanka Waxqabadka Help Me Grow Washington. Ka akhri wax badan oo ku saabsan hogaaminta kooxda halkan.
Janaayo 6, 2021
Codso Guddiga Qorsheynta Madasha 2021 Help Me Grow!
Baro wax badan oo ku saabsan doorarka FPC iyo masuuliyadaha, waqti go'an, dhiirigelinta iyo sida loo codsado! Codsiyada waxaa la aqbali doonaa ilaa Janaayo 20, 2021.
01/19/2021 1:00 duhurnimo 01/19/2021 2:15 galabnimo
Qeexida Awood Buuxa: Qorshaha Istaraatiijiga ah ee Help Me Grow
Ku biir Xarunta Qaranka si ay u wadaagaan aragtida la dedejiyey ee faafinta iyo miisaanka Help Me Grow, horumarinta nidaamyada si caalami ah ay heli karaan dhammaan qoysaska. Isku diwaangeli xaflada maanta!
Diseembar 2020 Warsidaha Help Me Grow Washington
Wax ku saabsan shaqada Kooxaha Waxqabad eeyada, soo dhawoow Maareeyaha Shabakada HMG oo hel wararkii ugu dambeeyay ee shabakadaha HMG ee heer qaran iyo heer gobol!
Wac Help Me Grow Central WA!
Help Me Grow/Ayúdame a Crecer Central WA oo ku taal Degmooyinka Yakima iyo Kittitas ayaa leh nambar telefoon cusub oo loogu talagalay qoysaska taageerada raadsada- naga soo wac maanta 509-490-3009!
09/20/2021 12:00 subaxnimo 09/23/2021 12:00 subaxnimo
Help Me Grow Forum Virtual 2021
Madasha Qaran ee Sannadlaha ah ee Help Me Grow (HMG), oo ay martigeliso Xarunta Qaranka ee HMG, ayaa fursad u ah xiriirada iyo la-hawlgalayaasha inay isku xiraan, abuuraan iskaashiyo cusub, oo ay wax ku bartaan midba midka kale.
12/16/2020 12:15 pm 12/16/2020 1:30 galabnimo
Ku Bilow Sinnaanta: 14 Waxa Mudnaanta Leh Burburinta Cunsuriyadda Nidaamka ee Daryeelka Hore iyo Waxbarashada
Baro kheyraadka cusub ee Mashruuca Sinnaanta Carruurta kaas oo qeexaya 14 mudnaanta muhiimka ah iyo siyaasadaha la fulin karo kuwaas oo isla markaaba si dhab ah u horumarin kara sinnaanta daryeelka hore iyo nidaamka waxbarashada.
Noofambar 17, 2020
Oktoobar 2020 Warsidaha Help Me Grow Washington
Waa wakhti xiiso badan hadda Help Me Grow WA, iyadoo la bilaabayo Kooxahayada Waxqabadka iyo ilo kale oo badan.
Sebtember 22, 2020
Daawo Fiidiyowga Dhacdada Taxanaha Waxbarshada ee Koritaanka Carruurnimada Hore
Daawo oo wadaag duubista dhacdada Taxanaha Waxbarashada WithinReach ee ku saabsan horumarka caruurnimada hore.
Sebtember 4, 2020
Dhisida Help Me Grow Nidaamka Washington
Shabakadda internetka ee halka saac ah, kaqeybgalayaashu waxay baran doonaan sida looga qayb qaato abuurista nidaam Help Me Grow oo siman oo Washington ah, iyo sidoo kale wax ku saabsan qaab dhismeedka cusub ee Help Me Grow Washington, oo ay ku jiraan doorka kooxaha waxqabadka.
09/16/2020 5:30 galabnimo 09/16/2020 6:30 galabnimo
Dhacdada Taxanaha Waxbarashada Bilaashka ah ee Dhacdada Koritaanka Carruurnimada Hore
Ka dhegayso guddi khubaro ah oo ka hadlaya mid ka mid ah arrimaha caafimaadka ee maanta ugu adag uguna saamaynta badan.
Ogosto 27, 2020
Ogosto 2020 Help Me Grow Washington Warsidaha
Waxaan ku faraxsanahay inaan wadaagno wararka muhiimka ah ee ku saabsan ballaarinta Help Me Grow ee Washington oo dhan.
Ogosto 20, 2020
Waalidiinta Ku Hogaamisa Cadaalada Jinsiga ee Bulshadooda
Isku diwaangeli wadahadalkii ugu dambeeyay "Talking Race & Kids" Ogosto 25.
Ku biir Kooxda Waxqabadka Help Me Grow WA!
Waxaa lagugu martiqaadayaa inaad gacan ka geysato qaabaynta balaarinta Help Me Grow Washington midaysan.
Luulyo 29, 2020
WithinReach waa Shaqaalaysiinaya Maareeyaha Shabakada HMG!
Booskani wuxuu hogaamiyaa qorsheynta, hirgelinta, iyo fidinta iyo ku-celinta guusha leh ee qaabka Help Me Grow ee bulshooyinka Washington oo dhan.
Luulyo 7, 2020
Juun 2020 Warsidaha Help Me Grow Washington
Ku soo dhawoow warsidahayagii ugu horreeyay ee Help Me Grow Washington! Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan bilowno inaan la wadaagno wararka joogtada ah ee dadaalka HMG saaxiibadayada.
Luulyo 6, 2020
Dhisida Nidaamka Help Me Grow WA
Webinar-kan, ka baro sida aad uga qayb-qaadan karto abuurista nidaam Help Me Grow oo siman gudaha Washington.
Madasha Qaran ee Help Me Grow ee sannadlaha ah
Ka hel cajaladaha, sawirada iyo agabka dhammaan fadhiyada Madasha.
Hagaha Ilaha: Daryeelka Qoyskaaga Inta lagu jiro COVID-19
DCYF waxay u samaysay hagahan si ay u xoojiso adkeysiga waalidiinta iyo qoysaska inta lagu jiro aafada.
Jawaabaha Xiriirinta Help Me Grow ee COVID-19
Akhri sida nidaamka HMG ee bulshooyinka kala duwani uu uga shaqeeyo wax ka qabashada baahiyaha qoysaska inta lagu jiro COVID-19.
Abriil 14, 2020
Awoodda Dhisidda: Ka Gudubka Xagga ACEs oo leh RAJO Waqtiyada Dhibaatada
Webinar-kan oo ka socda Help Me Grow National waxa uu ka hadlayaa sida shaqadeenu ay uga caawin karto ka ilaalinta carruurta saamaynta xun ee dhibka.
COVID-19: Dhallaanka iyo socod-baradka ku jira Daryeelka Ilmaha ee Gurmadka ah
EBER ILAA SADDEXAAD waxay bixisaa talooyinka qaabaynta nidaamyada bixiya daryeelka oo ka jawaabaya baahiyaha carruurta shaqaalaha muhiimka ah.
Maarso 27, 2020
Jawaabta Xiriirinta Help Me Grow ee COVID-19
Ka soo qaado sahankan HMG National, si aad si wanaagsan uga taageerto qoysaska leh carruurta yaryar si ay u aqoonsadaan baahiyaha oo ay u bixiyaan isku xidhka iyo gudbin.
Tababarka Xoog-shaqeeedka Ku-saleysan Bulshada ee COVID-19
Ma la shaqeysaa dadka bulshadaada ka tirsan inta uu dillaacay COVID-19? Ku biir tababbarka khadka tooska ah ee Maarso 31.
Maarso 17, 2020
Waxaan ognahay in xaaladda COVID-19 ay u keenayso walaac iyo hubanti la'aan qoysaska; si kastaba ha ahaatee, waxaan halkan u joognaa inaan bixino taageero.
Maarso 1, 2020
WithinReach waa Shaqaalaysiiyaha Ilaha Qoyska!
Qofkani wuxuu u adeegi doonaa sidii meesha ugu horeysa ee lagala xiriiro qoysaska Degmada Skagit si ay u raadiyaan macluumaadka ku saabsan ilaha iyo taageerada deegaanka.
U doodista Xalka Caafimaadka Muddada Dheer ee Qoysaska
Shabakadda Help Me Grow Washington waxay u dooddaa xalal caafimaad oo waara si dhammaan carruurta, qoysaska iyo bulshooyinka ay u koraan.
Help Me Grow Dulmarka Nidaamka
Wax ku saabsan Help Me Grow Washington ka baro WithinReach's Chief Strategy Officer, Sharon Beaudoin, iyo Public Health-Seattle & King County's Lataliyaha Istaraatiijiyadeed ee Help Me Grow, Marcy Miller.
05/11/2020 9:00 subaxnimo 05/13/2020 5:00 galabnimo
Madasha Qaran ee 11-aad ee Sannadlaha Help Me Grow
Fadlan ogow: Madasha Qaran ee Help Me Grow ee loo qorsheeyay May 11 illaa 13 ee Indianapolis, Indiana, waa la joojiyay.
Febraayo 1, 2020
Helitaanka caawimo waa adag tahay. Waxaan u fududaynaynaa.
Waxaan ka caawinnaa dadka gobolka oo dhan inay maraan nidaamyada caafimaadka iyo adeegga bulshada ee adag.
Janaayo 24, 2020
Janaayo 2020 Samaynta Xiriirinta
Baro wax badan oo ku saabsan sida aan u kasbannay Help Me Grow Washington - isku xidhka kheyraadka adeegyada iyo taageerada bulshada - kalfadhigii ugu dambeeyay ee sharci dejinta.
Janaayo 10, 2020
Help Me Grow: Dhaqdhaqaaq Qaran oo dhan
Dr. Paul Dworkin oo ka socda Help Me Grow National wuxuu ka hadlayaa qaabka Help Me Grow iyo doorkiisa dhismaha nidaamka caruurnimada hore.
Oktoobar 24, 2019
Oktoobar 2019 Samaynta Xiriirada
Baro wax badan oo ku saabsan maalgashiga si loo ballaariyo shaqada Help Me Grow ee gobolka oo dhan oo si wanaagsan loogu xiro qoysaska aan la daboolin ilaha adeegyada caafimaadka iyo bulshada.